Kedu ka esi emezi okwu?
Ụmụ akwụkwọ ọ bụla na-amụ asụsụ mba ọzọ jụrụ ajụjụ a. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche isi meziwanye okwu, nke anyị ga-atụle n’isiokwu a:
1. Na-ege ntị ma na-edegharị okwu ndị ịchọrọ ịkọ
2. Jiri usoro kaadị ọkụ
3. Ịmepụta mkpakọrịta na visual
4. Icheta ahịrịokwu na nkebi okwu ndị nwere okwu ọhụrụ
5. Ịkpọ okwu ọhụrụ
6. Icheta okwu ohuru tinyere okwu ha na antonyms ha
7. Na-ekiri fim na vidiyo na asụsụ ị na-amụ
Iji zaa ajụjụ bụ “Kedu ka esi emezi okwu?” ọ dịkwa mkpa iji ghọta onye ọ bụla ma ọ bụ ihe omimi nke ebe nchekwa gị. Nye ụfọdụ ndị ọ ka mma na ngwa ngwa iji cheta okwu ọhụrụ site na ige ntị, maka ndị ọzọ, ederede ma nyochaa ederede ederede bụ ịrụ ọrụ nke ọma. Ọtụtụ ndị na-achọta na ọ dị irè iburu okwu na-eburu ọnụ site na iji foto ma ọ bụ foto. Ya mere, ị nwere ike ịhọrọ ụzọ ndị ọzọ iji meziwanye okwu ndị ga-arụ ọrụ kachasị mma maka gị.
Ka anyị nyochaa usoro nke ọ bụla iche ma tụlee ihe ndị nwere ike iji rụọ ọrụ kachasị mma:
Ọtụtụ ndị na-echeta okwu ọhụrụ kachasị mma site n’enyemaka nke ịge ntị mgbe niile.
Ị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ndekọ nke nwere ike igosi okwu ọhụrụ site na ihe ị na-amụ, ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nụrịrịrị ọkara nke okwu na ndekọ ahụ, ma na-agbalị ịmalite ikwu okwu ndị ọzọ? Ka anyị kweta na ọ dịghị mkpa ka ị gee ntị na ụda olu ahụ ugboro ugboro, ma ọ bụrụ na i bugoro okwu ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ọgụgụ nzaghachi na nkwụsị nke okwu mkparịta ụka n’etiti onye ọ bụla kwesịrị ịbụ onye dabeere na njirimara nke ebe nchekwa gị.
N’ihi nke a, anyị mepụtara otu ọkpụkpọ egwu LingoCard pụrụ iche, nke ị nwere ike ihichapụ okwu niile a mụtara ma gee ntị na ndị ị na-amaghị. Ị nwere ike ịgbanwe ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị okwu (ma ọ bụ nsụgharị ha) na ogologo oge kwụsị n’etiti okwu na ọnọdụ nke ga-arụ ọrụ kachasị mma maka gị.
O nwekwara ike ịmepụta ma gee ntị na ihe mmụta gị site na faịlụ ọ bụla. Nanị bulite ederede na nsụgharị gaa na ọkpụkpọ ma gee ntị.
Usoro a dị irè karịsịa ma ọ bụrụ na enweghị ohere ị ga-eji na-amụ ihe, n’ihi na ị nwere ike ige ntị n’ihe mmụta ahụ n’oge ọ bụla nakwa n’ebe ọ bụla.
Ugbu a, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ ọdịyo dị na isiokwu ụfọdụ dị. Iji buru okwu ohuru, ị nwekwara ike itinye ha na listi gị na ngwa anyị wee gee ha ntị site na iji ọkpụkpọ ahụ.
Ụzọ kachasị ewu ewu iji meziwanye okwu bụ ịmepụta kaadị kaadi, ebe otu akụkụ nke kaadị ahụ nwere okwu na-echefu ncheta, akụkụ nke ọzọ nwere ihe ma ọ bụ nsụgharị okwu ahụ.
Mgbe ị na-emepụta kaadị nke kaadị, ị na-amalite ile anya site na ha, jiri nwayọọ nwayọọ wepụ kaadị ndị ị nụworo, ruo mgbe ị mụtara dum oche.
Mgbe ọnwa ole na ole jiri usoro a mee ihe, enwere m ọtụtụ narị kaadị ndị na-esighi ike ibugharị.
Achọrọ m ịgbanwe iwu nke okwu m na-eburu n’uche, dịka ọmụmaatụ: mkpụrụ akwụkwọ, na-agbanwe akwụkwọ edemede, enweghị usoro, na isiokwu na ihe ndị ọzọ.
N’ihi ya, ekpebiri m iji smartphone, ma enweghị m ike ịchọta ngwa ngwa ma dị mfe. Ya mere, enwere m echiche nke ịmepụta ngwa ngwa maka smartphones, na ọnwa ole na ole ka e mesịrị, m mepụtara ngwa ngwa LingoCard ngwa mbụ na kaadị nchekwa na otu nchekwa data. Ọ dị mkpa ka ịme ka kaadị dị na olu nke okwu ọ bụla ma mepụta ọtụtụ ọdụ data na okwu ndị a kachasị mee ihe. Amalitere m iji nkwurịta okwu arụ ọrụ na ụfọdụ ọkachamara ọkachamara m maara. Ụmụ okorobịa ahụ nwere mmasị n’echiche m, ndị na – anụ ọkụ n’obi wee malite isonyere ọrụ ahụ. Mgbe anyị mejuputara echiche ọhụrụ, anyị kpebiri na anyị agaghị akwụsị n’ebe ahụ ma mepụta ọtụtụ ngwaọrụ pụrụ iche ndị dị ugbu a na sistemụ arụmọrụ abụọ: Android na iOS. Anyị ejirila ngwa anyị kwadoro na Google Play na Ụlọ Ahịa Apple maka mba niile na mba niile.
Ọtụtụ ndị nwere ebe dị mma na-ahụ anya ma nye ha ọ nwere ike ịba uru nke ukwuu ịmepụta mkpakọrịta na ihe ngosi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọta ihe nke mba ọzọ ị na-apụghị icheta ozugbo, ịnwere ike ịde foto nke ihe a ma dee okwu na ya n’asụsụ ị na-amụ.
Na ngwa anyị, ọ ga-ekwe omume ịmepụta kaadị na foto si na igwefoto ma ọ bụ foto ọ bụla na Ịntanetị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ebe nchekwa dị mma ma ghara icheta ụfọdụ okwu ma ọ bụ okwu, ịnwere ike idetuo okwu a n’ime search engine ma budata foto ọ bụla kwesịrị ekwesị, tinye ya na kaadị ọkụ.
Ọ bụ ụzọ dị irè isi meziwanye okwu na ịmụ asụsụ mba ọzọ. Ya mere, ị na-echeta ozugbo ụyọkọ okwu na usoro iwu. Nke a na-enye gị ohere weghachite ikpe mara mma na mkparịta ụka n’enweghị mkpa icheta okwu ọ bụla iche.
Ọ bụrụ na okwu ị na-amụta nwere ọtụtụ ihe, usoro a nwere ike ịba uru. Nke a dịkarịsịrị dịka ọmụmaatụ na Bekee, ma ghọta na eji okwu eme ihe, ọ ka mma iburu ya na amaokwu.
A na-anakọta ihe karịrị puku iri abụọ na abụọ dịka akwụkwọ ọkọwa okwu dị iche iche na saịtị anyị ma ihe dịka ọkara n’ime ha na-agụnye ahịrịokwu na ahịrịokwu.
Ikwupụta okwu ndị ị na-amụ mgbe niile na n’ụzọ ziri ezi na-enyere aka iburu ha n’isi.
Usoro a dị mma iji mee ihe mgbe ị nụsịrị okwu nke okwu na ikwughachi ugboro ugboro.
Gbalịa ịkpọ ha na okwu ndị ọzọ ma ọ bụ ahịrịokwu.
Anyị na-enyefe kaadị asụsụ ọ bụla na-ege ntị na asụsụ ọ bụla iji nụ ihe atụ nke ezi okwu.
Mgbe ịmalitere ọkpụkpọ ọkpọ ọ dị oke irè ikwughachi okwu okwu n’oge ịkwụsịtụ, maka nzube a, ọ ka mma imekwu ogologo oge ịkwụsị n’etiti okwu dị na nhazi ntọala nke onye ọkpụkpọ.
Usoro kachasị mma bụ ịkọwa okwu na okwu ha ma ọ bụ ihe yiri ha.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche echiche site n’enyemaka nke ndị mmekọ, na ịmalite ịchọta ozi ọhụrụ nwere ike ịdị nnọọ irè na njikọ ihe ọmụma nke okwu ndị yiri ya ma ọ bụ nke mmegide.
Ị nwere ike iji usoro a site na ịmepụta kaadị kọlụm na nkwupụta na nkwonkwo.
Download akwụkwọ ọkọwa okwu na synonyms na antonyms si Ịntanetị ma ọ bụ chọta ha na ọtụtụ nkuziri onwe gị nke asụsụ ị na-amụta. Mgbe ị chịkọtara ihe ọzụzụ ịchọrọ, ịnwere ike ịnyefee data na faịlụ ederede ma bulite na ngwa anyị. N’ihi ya, ị ga-emepụta nchekwa data gị nke klọb kaadị maka ihe omumu gị ma ọ ga-enwe ike ịmụta okwu ọ bụla nke okwu iji ngwaọrụ anyị niile.
Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke kaadị ndị e ji kee ihe na nkwonkwo na-adịrịrịrịrị na ọdụ data anyị.
Site na iji usoro a, ị nwere ike iburu okwu ọhụrụ dị iche iche na ntụgharị uche ha ma ọ̄ bụ nke ọzọ, nke ga-enye gị ohere ịmepụtawanye okwu gị.
Nke a bụ ma eleghị anya ụzọ kachasị mfe ma dị irè iji melite okwu, nke a pụrụ iji kpọmkwem site na ndị ọkà okwu.
Ọ bụ ụzọ dị mma isi na-eburu okwu ọhụrụ nke sitere na asụsụ asụsụ. Mgbe ị na-amụ asụsụ ọhụrụ, ọ dị mkpa ka ị ghọta ụdị ụja na idioms nke a pụrụ ịchọta na fim.
Ị ga-ekpebi ụdị asụsụ mba ọzọ ịchọrọ ịmụta. Dịka ọmụmaatụ, Bekee nwere ọtụtụ nkewa dịka American English, Australian English, British English, na na. Dabere n’ụdị asụsụ ị chọrọ ịmụta, ịkwesịrị ịhọrọ fim ndị a gbara na mba ahụ.
Lelee ihe nkiri na mbụ site na ndepụta okwu maka nghọta ka mma. Ọ bụrụ na ịnụrụ okwu nke ị na-apụghị icheta n’otu oge, ịkwesịrị ide ya na akwụkwọ ọkọwa okwu ma weghachite ya n’ikpeazụ.
Mgbe okwu ncheta na-agafe na fim, ana m echere, na-asụgharị, ma debe ya na ngwa LingoCard. Mgbe ahụ, m na-ege ntị n’okwu niile dị na onye na-egwu egwu ma cheta ha na iji kadị.
Iji dozie ihe ahụ, oge ọzọ ị nwere ike ịlele otu ihe nkiri ahụ n’enweghị ndepụta okwu – ọ bụrụ na ịhọrọ otu ihe nkiri na-akpali mmasị, nlele nke abụọ agaghị agwụ ike.
N’ihi ya, na fim ọ bụla ị na-ekiri, ị ga-achọ ịmepụta obere kaadị ọhụrụ na ole na ole, n’ihi na okwu gị ga-agbasawanye mgbe niile.
Echefula banyere oge; setịpụ ihe mgbaru ọsọ iji ele ma ọ dịkarịa ala otu ihe nkiri otu izu na asụsụ ị na-amụ, ma ọ bụ ọbụna ka ị na-ekiri ihe nkiri ọ bụla naanị n’asụsụ ị na-amụ na mgbe ụfọdụ gasịrị, ị ga-ama asụsụ ọhụrụ ahụ.
Gbalịa iji ụzọ niile dịnụ iji chọpụta onye kacha mma maka gị.
Mgbe ị kpebiri na ịhọrọ ma ghọtara onwe gị otu esi edozi okwu gị kacha mma, ịkwesịrị icheta isi akwụkwọ nke mmụta mmụta dị irè:
1. Ịga n’ihu. Ịkwesịrị ịdị na-eme kwa ụbọchị.
2. Họrọ naanị ngwaọrụ kachasị mma maka ọzụzụ
3. Kpebisie ike oge kacha mma maka ịmụ na ịmụta ihe ọhụrụ
4. Nyochaa olu nke ihe a na-amụ
5. Setịpụ ihe mgbaru ọsọ doro anya maka ọnụọgụ nke ihe onwunwe iji na-eburu ụbọchị kwa ụbọchị
Na ngwa mkpanaka anyị, anyị agbalịrị imezu ụzọ niile dị mma iji meziwanye okwu ma ugbu a, ọ dị ndị mmadụ n’ebe ọ bụla n’ụwa. Naanị ịkwesịrị ịwụnye ngwa ahụ na ama ama gị ma denye aha na usoro iji chekwaa okwu gị n’elu ihe nkesa igwe ojii.
Anyị na-arụ ọrụ ịmepụta usoro ihe omumu ụwa maka ndị si mba niile, nke na-enye ohere ịmụ asụsụ mba ọzọ ma nwee usoro asụsụ na gburugburu ụwa. Enwere m olileanya na ihe omume anyị ga-eme ka mmelite mmụta gị dịwanye mma ma nyere gị aka ịmeziwanye okwu gị.